ရိုးမ ရဲ့ ဟိုဖက်မှာ .. | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
မြင်တာနဲ့နံပတ် ၁ ပြေးယူထားတယ်
ခုတော့လည်း လွမ်းစရာတွေပေါ့။ တောင်တက်ကားတွေက အားလုံးအတူတူပဲထင်တယ်။
ခြေမြောက်မြောက်နဲ့ လိုက်ရလို့ စိန်မြောက်မြောက်ကားလို့ကိုယ်က နာမည်ပေးထားတယ်။
လေဘေးထုတ်တွေက နိင်ငံတစ်ကာက ရခိုင်လေဘေးကိုပေးတဲ့ ကြက်ခြေနီအလှူ။
ခုနေသာ ချိုသင်းဗမာပြည်မှာဆိုရင် ချိူသင်း ခရီးသွားနေသည်လို့ အခွေထုတ်လို့ ရတယ်။
ရေးထားတာ ကိုယ်လည်းကားကြီးနဲ့ လိုက်တက်ရသလိုပဲ။
တော်သေးတယ် လိုက်မအန်မိလို့ ။
ဖိုးစိန်ဆီရောက်ရင် မအယ်ကို အကြောင်းကြားလိုက်။ လိုက်လာမယ်။
ပြီးရင် ကိုယ်တို့ ဆီ ခရီးဆက်ကြမယ်။
ရန်ကုန်-ပြည်-တောင်ကုတ် ကားနဲ့ သွားဖူးတယ်ဂျ၊ တောင်ကုတ်ကနေ ငပလီသွားပြီး သံတွဲက ရန်ကုန်ကို အမ်းတောင်ကြားလမ်း (ထင်တာ) အတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်းဖက်က ပတ်ပြန်လာဖူးတယ်...။
ဦးကျောက်တောင်နာမည်ကို အရမ်းရင်းနှီးတယ်၊ မြို့မိမြိုဖ မို့။ မမနဲ့ ငပလီမှာ တွေ့ရရင်ကောင်းမှာနော်...။
ကိုဒီဘီ့ ချစ်ချစ်က တောင်ကုတ်သူ သိလားမမ။ (ဖွသွားသည်။)
မြန်မာပြည်မှာ ပြောရင် သွားချင်စရာနေရာတွေအများကြီးပဲ... တနေ့ကပဲ အမေပို့လိုက်လို့ လွင်မိုး ချင်းပြည်ကိုသွားတဲ့ စာအုပ် ကိုဖတ်ပြီး လွမ်းလိုက်တာ... လှလည်းလှ ဗဟုသုတလည်းရ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားအကြောင်းတွေလည်းသိ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကတော့ ခက်နေသေးတာပဲနော်။
ကိုယ့်နိုင်ငံက ရှုခင်းပုံကောင်းကောင်းတွေတွေ့ရင်သူများတွေကို ကြွားရတာအမော ။ သွားရေး လာရေးသာလွယ်ကူရင် ငါတို့နိုင်ငံတော့ ဆိုပြီးတွေးတာလဲ ခဏခဏ ။ ဟင်း...
ရှေ့ကပြင် နောက်ကပျက်။ နောက်ကပြင် ရှေ့ကပျက်။ လမ်းကို ကြည့်တာနဲ့တင် အနိစ္စကို မြင်ပြီး တောထွက်ချင်လောက်ပါရဲ့။ :D
အမချိုသင်းပြောတဲ့ ရိုးမရဲ့ဟိုဖက်ကို မရောက်ဖူးဘူး။ အညာသူဆိုတော့ ပိုလို့ အဲဒီဖက်တွေကို စိမ်းတယ်။ ရောက်လည်းရောက်ဖူးချင်တယ်။ ငပလီကိုလည်း သွားချင်တယ်။ နွေးထွေးဖြူစင်မှုတွေကို ကိုယ့်ဆီမှာမှ တွေ့နိုင်တယ်ထင်တယ် အမရဲ့။ ကြက်သွန်ကားတွေများစီးရရင် နိနိလည်းအန်တယ်။ နိနိတို့မြို့ကနေ ယောနယ်ဖက်ကိုထွက်တဲ့ကားတွေလည်း ဘေးမှာချောက်ကမ်းပါးတွေနဲ့ ကြက်သွန်အိတ်တွေအပြည့်အမောက်နဲ့ စီးရတာ။ ဒီလို ကူးလူးနေရတဲ့အခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲသေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခရီးဝေးကားတွေက သီချင်းလေးကို အဖော်ပြုသွားရလို့ ထင်ပါ့။ ကားပေါ်မှာ ရှမ်းသီချင်းတွေလည်း ဖွင့်ကြတယ်နော်။ လွမ်းစရာလိုလို ဘာလိုလိုပဲ။
အမချိုသင်းရေ ခရီးသွားချင်နေရင် ဒီဖက်ကို မျက်စပစ်လိုက်ပါ့လား ဟင်။ ဖိုးစိန်ဆီမသွားနဲ့နော် အမ။ နိနိဆီကို လာပါ။
ဟိုက် ရှာလပါတ်ရည် .. ဆင်မ ဝင်ဖွသွားပါလား။
ငြိမ်နေလို့မရတော့ဘူး။ ဝင်ပြောရပေတော့မယ်။ (အဟိ)
လမ်းခရီးကတော့ ခုလဲအရင်အတိုင်းပါဘဲလေ။ မနှစ်ကတောင် ရောက်ခဲ့သေးတယ်။ ဆတ်သားခြောက်နဲ့ ဆီထမင်းကတော့ ကျွန်တော်လဲ သိပ်ကြိုက်။ သူမနဲ့ အကြောင်းမပါခင်က ဆွေပြမျိုးပြ မျက်နှာသွားပြတုန်းက စွန့်စားခန်းလေးတွေ ရေးဖို့စိတ်ကူးရှိသေးတယ်။ ဟီးဟီး။
စိတ်ကူးမလွဲနဲ့နော် ဒီမှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်
ကျုပ်ပြန်ဦးမယ် လိုက်မလားး)
ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်.. မနော်ပါ အတူခေါ်လာခဲ့လေ.
ဒီမှာ အခုရာသီဥတု ကောင်းနေပြီး..မချမ်းတော့ဘူးလေ.
ရိုးမဘက်ကို မရောက်ဖူးဘူး မချိုသင်းရေ...
အဲ့ ဆင်ဆင် ကနေရာတကာလျှောက်ဖွနေတာပဲ. :P
အမ နဲ့ တူတူ တောင်ကုတ်သွားတဲ့ကားကြီးစီးလိုက်တာ
နဲနဲတောင် ပင်ပန်းသွားတယ်း)
အမရဲ့ အရေးအသားတွေက သရုပ်ပေါ်
dunno what to say about this post.. very touching and amazing one which consists of lots of souvenir and enjoyment!!!
မရောက်ဖူးသေးဘူး ချိုသင်းရဲ့..ငပလီကို လေယာဉ်နဲ့သွားတာလောက်ပဲ..ရှုခင်းတွေတော့ လှမယ်နော်...ချိုသင်းစာဖတ်ရတာနဲ့ပဲ ခရီးသွားချင်စိတ်တွေ ထကြွသောင်းကျန်းလာပြန်ပြီ.. ဒါပေမယ့် အခြေအနေမပေးသေးတော့ နောင်များမှပဲ မရောက်ဖူးသေးတဲ့ နေရာတွေ သွားဦးမှ..။
ငပလီကိုတောင် လွမ်းသွားတယ်။ သွားရလာရတာ ခရီးပန်းပေမယ့် နောက်ထပ်တခါ ထပ်သွားချင်မိတယ်။
ရခိုင်လဲမရောက်ဖူး။ ငပလီ လဲမရောက်ဖူးဘူး။ ဖတ်ပြီးရင်ထဲမောကျန်ခဲ့တယ်။ တကယ်ပြောတာ
အစ်မရေးထားတာ မျက်စိထဲမှာ မြင်လာတယ်
ငပလီကိုတော့ တစ်ခေါက် ရောက်ဖူးပါတယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တခြားနေရာတွေတော့ မရောက်ဖူးဘူး
တီအီး ၁၁ ကြီးနဲ့ လမ်းမှာ ၂ ည အိပ်ရတယ်။
မိုးထိမှာ တိမ်တွေ မကိုင်ခဲ့ရဘူးလား ..
တစ်ခါက ငယ်ငယ်က ရတန်းထင်တယ်..
ဘာသာခြားချည်းပဲ..ဒရိုင်ဗာနဲ့ စပယ်ယာက လွှဲလို့
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတည်းတာ..မေမြို့က ပါလာတဲ့ ငှက်သိုက်မလိုင်မုန့်တွေကပ်လှူခဲ့သေးတယ်
အိမ်က အမေက ဒယ်အိုးတွေ ကြာညို့တွေ..ဆား..တရုတ်မဆလာတွေ ထည့်ပေးလိုက်တယ်...ငပလီရောက်တော့ ထမင်းအလှည့်ကျချက်စားတယ်..
မမချိုသင်းရေ…ပျော်စရာကြီး ။ အနော်တောင်ကားနဲ့ သွားချင်လာပြီ။ ကားနဲ့ မရောက်ဖူးသေးဘူး။ တော်သေးတယ် မမရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို လာချောင်းတာ အသစ်တင်လို့
မတင်လို့ကတော့ အိပ်မက်တောင်ထည့်မက်တော့မလို့။ အသစ်ဖတ်ချင်လို့အော်ငိုနေတယ်ဆိုပြီး…ဟဲဟဲ
အခုဒီနေ့ ဒီပိုစ့်မှာ လာရေးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ အတူတူ ကားကြီးတစ်စီးငှားပြီး ခရီးထွက်ရရင် ကောင်းမယ်နော်...
ကားပေါ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကာတွေပြောကြ...
တစ်ယောက်က ပြောသွားတာကို နောက်တစ်ယောက်က ကွန်မင့်တွေ့ ပေးကြ...
ဘလော့လည်သလို တစ်ယောက်တစ်လှည့်စီ ခုံတွေကို ရွှေ့ ထိုင်ကြ
ဒို့ လည်းလိုက်မယ် ချန်မထားနဲ့ .... မြန်မာပြည်ကိုပြန်ကြမယ်လေ...။မကောင်းဘူးလား...။
ဂိုက်ကလေ ဒူရင်းသီးရွေးနည်းနဲ့ စားနည်း သင်ပေးလိုက်တယ်အမ..
ကိုလူထွင်း အကြံကောင်းတယ်။ ဒဏ္ဍရီလိုလေ။ ကားကြီးနဲ့ သွားကြမယ်။
ဂျစ်ဂျစ်ကိုကော ခေါ်ခဲ့လို့ ရတယ်မလား။
ဟာ ရှုတ်ပါတယ် ချိူသင်းရာ။ လက်ပစ်ကူး သွားကြမယ်။ ဘလောဂါတွေရဲ့ အိမ်မှာ အစောင့်တွေရှိတာမှ မဟုတ်တာ။ သူများတွေ စစ်သား ၄သိန်းဝိုင်းထားတာတောင် လက်ပစ်ကူး ၀င်နိုင်သေးတာ။
မမ ရေးတာဖတ်ပြီး ရိုးမဖက်ကို ကားစီးပြီးသွားချင်လာပြီ...။ သွားဖို့အရင်က ကြံဖူးတယ်..ဦးလေးတစ်ယောက်သွားတာ ကားပျက်ပြီး နာရီ ၃၀လောက်ကြာသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ လန့်ပြီး မသွားဖြစ်တော့တာ...။
Comment ရေးမလားလို့.. ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ်ရေးချင်တာတွေ တချို့က ရေးသားပြီး ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မဆလ ခေတ်တုံးက လူတွေ တနေရာကနေ တနေရာ သိပ်မရောက်ဖူးကြဘူး။ ဆင်းရဲလို့လေ။ အခု စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်မှာတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။
အန်တီချိုသင်းရေးထားတာ ဖေဖေတာဝန်ကျလို့ (၇)နှစ် နေခဲ့ရတဲ့ သံတွဲကို လွှမ်းလိုက်တာ။ အခုအထိလည်း ကလေးတွေ လက်ပြတုန်းပဲပြ။ ကားပေါ်ကနေ သကြားလုံးပေးရင်း ၀ိုင်းကောက်လိုက်ကြတာများ အလုအယက်။
အင်း... ငပလီကတော့ အလှဆုံးပါပဲ။ အခုဆို ဘန်ဂလိုတွေ၊ ဟော်တယ်တွေ (နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု) အရမ်းလန်းနေတာ။ အဲဒါတွေဆောက်ဖို့ အုန်းခင်းအသိမ်းခံရတဲ့ လူတွေတော့ လျော်ကြေးမှရရဲ့လားမသိ။
ဒီတစ်ခေါက် ရွာပြန်ဖြစ်မှ မေးကြည့်လိုက်အုန်းမယ် ဖေဖေ့ကို။ ငပလီကိုလည်း သွားဖြစ်အောင်ထက်သွားလိုက် အုန်းမယ်။ အဲဒီ့က ရခိုက်ကြက်သောက်စမ်းဆို ကောင်းမှကောင်း။ ရှလွှတ်။
Eek! အန်တီချိုသင်းလိုက်မိတယ်. မသိလို့
Craton မန့်ထားတာ အဲလိုခေါ်ရင်အကြိုက်ဝူးတဲ့။
ဟီးဟီး.. ဆောရီး။ နောက်မခေါ်တော့ဝူး ရှေ့ပဲ... :D
မမိုးရေ ကျနော်လည်းခရီးသွားရတာကို ကြိုက်တယ်..
ကျနော်တို့က Geology သမားတွေဆိုတော့ ခရီးပဲသွားချင်းနေကြတယ်နော.. ခရီးသွားရင်ဓါတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းယူရတာကို ပိုပြီးသဘောကျတယ်....
မမိုးချိုသင်း ရေးထားတာ ပျော်စရာကြီး (ကြက်သွန်အိပ် မပါရင်).. ရခိုင်ဘက် တခါမှ မရောက်ဖူးဘူး၊ ပုဇွန်ထုပ် ဆီထမင်း ဆတ်သားကြော်.. အကုန်စားချင်တယ် :(
လာဖတ်သွားပါတယ် မချိုသင်းရေ။ ကိုယ်တိုင်ခရီးသွားလိုက်ရသလိုပါပဲ။ အစ်မလဲ ကားကြီးတွေနဲ့ ခရီးသွားရတာကြိုက်တယ်။ လမ်းမှာကြုံတာဝင်စား။ လမ်းခရီးဆို စားလို့ သောက်လို့ ဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိဘူး။သိလား။ အဲလိုတောင်တက်လမ်းတော့ ကြောက်တယ်။
အမြဲတမ်း လာပြီး အားပေးတတ်တဲ့ မချိုသင်းရေ... အဲဒီအတွက် အရင်ဦးဆုံး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ
ခရီးထွက်ဖို့ အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် လာအကြောင်းကြားပါ့မယ်။ မချိုသင်းတို့ မောင်နှံအတွက် စပါယ်ရှယ် seat ဦးပေးထားမယ်လေ...
ဟုတ်တယ်မမိုးရေ ကျနော်က Geology ကပဲ..
ကပါ..ကျနော်တို့Field ဆင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကို ကျနော့်ရဲ့ နောက်ထပ်ဘလော့တခုဖြစ်တဲ့ ခဏလေးများ မှာတင်ထားတယ်...လာလည်ပါအုံး ..ကျောင်းသားဘ၀ကိုပြန်လွမ်းသွားမယ်..သေချာတယ်
ဆတ်သားခြောက်တွေ ရတဲ့နေရာက.. ရေပေါ်ကြီး စခန်း လို့ ခေါ်တယ်
တောင်ကုတ်မှာ ဦးကျောက်တောင်နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့
လုပ်ငန်းလေးတော့ မဟုတ်လောက်ဖူး.. နော်..း)..
ငပလီ ကတော့ လှဆဲပါပဲ..
ခုတခေါက် မမ ရောက်ခဲ့တယ်လေ..
ပြန်ဆုံတဲ့ခါ တို့ တွေ ထပ်သွားကြတာပေါ့..
ရိုးမရဲ့ ဟို တဖက်က ဒီအတိုင်းပါပဲကွယ်..
ဒီတဖက်လဲ သိပ်မထူးပါဘူး ညီမရယ်..
ချမ်းသာသူတွေက ပိုပြီး ချမ်းသာ သွားကြပေမဲ့
ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကတော့.. ဆင်းရဲတွင်း က ပို နက် နေတာပါပဲ
တကယ်တော့ ခရီးသွားကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲမှာတင် သွားချင်စရာ ပျော်စရာ စိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေ အများကြီးရယ်...
လမ်းက စိုက်ခင်းလေးတွေထဲမှာ လက်ပြနေတဲ့ ကလေးလေးတွေ အရင်လိုပဲ ပြုံးနေကြသေးလား တကယ်ပဲသိချင်ပါဘိ ချိုသင်းရေ...။
ဒါနဲ့ ဘလော့လည်သလို တစ်ယောက်တစ်လှည့်စီ ခုံတွေကို ရွှေ့ ထိုင်ကြရင်း သွားကြမယ့် ခရီးအတွက် စာရင်းက ဘယ်သူ့ဆီမှာ ပေးထားရမှာလဲ...
လိုက်စေ လိုက်စေ ချိုသင်းရေ။
မချိုသင်းပြောတဲ့ နေရာတွေကို ရောက်ဖူးချင်တယ်ဗျာ :)
ချေ( ဂျီ)သားဟင်းနဲ့ ထမင်းစားခဲ့ဘူးတယ်..
ဟိုတုန်းက အဲယားကွန်းဘတ်စ် တွေမရှိသေးဘူး..ကုန်အပြည့်တင်ထားတဲ့ ကုန်ကားကြီးအမိုးပေါ်က စီးရတာ..
တိမ်တွေက ကိုယ့်ဘေးက ..
ကိုယ့်ကိုကိုယ် နတ်သားလိုလို ဘာလိုလို..း)
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ တကယ်လှတဲ့ နေရာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်..။တိုင်းရင်းသားတွေက ရိုးသားတယ် ဖော်ရွေတယ်..။
အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးတွေ ပေးရင်း သွားလည်ချင်သေးတယ်..။
Khin Lay said...
Thanksalot because Taung Goke is my native town. I lived near U kyaut Taung's house and his wife is my cousin sister.But I can't go back for 15 years. I miss too much.
While reading your article, it reminds me my events of travelling to Kachin State. I really really miss my country ,Myanmar( beautiful Myanmar). I also love travelling especially in Myanmar.ဒီမှာတော့မပျော်ဘူး။
အော်ဆရာမရေ့၊အရင်က၊ကျတော့ဂျီတော့မှာ၊(သည်တွင် ရွှေမြို့၊သည်သို့စေတီ)ဆိုတာရေးထားတယ်။အခုကျတော် တယောက်တည်း၊နေတာတနှစ်လောက်ရှိပြီ၊တော်သေးတာ ပေါ့၊အရင်က၊အထဲမှာ၈နှစ်လောက်နေခဲ့တဲ့အကျင့်လေး ရှိခဲ့လို့၊ခုနပဲ၊အသိလေးတယောက်က၊သူ့ဂျီတော့မှာ (ပိတောက်တွေရွှေရည်လူးခဲ့ပေါ့)တဲ့၊သူလည်းသင်္ကြန်ကို သတိယပြီးရေးးထားတာ၊အဲလိုပဲမြန်မာပြည်ကိုသတိအမြဲရ နေတာ၊အခုဆရာမရဲ့ခရီးသွားဆောင်းပါးလေးဖတ်ရ တော့၊ဘယ်လိုသတိရမှန်းမသိအောင်ပါပဲဗျာ၊
ချက်ချင်းတောင်ပြန်ပြေးလိုက်ချင်တယ်၊ ဟိုတုံးက၊ ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေ၊နေခဲ့တဲ့နေရာတွေ၊ခရီးသွားခဲ့ တာတွေအားလုံးပြန်သတိယလိုက်တာဗျာ။
အခုကျတော်တို့ရောက်နေတဲ့၊နေရာ၊နဲ့အားလုံးကွာခြား လေတော့၊ပြည်ပရောက်နေတဲ့ကျတော်တို့လူမျိုးတွေက ကိုယ့််လူမျိုးကိုယ်၊(ရွှေ)လို့နာမည်ပေးတာလည်း ပေးထိုက်ပါလားလို့အောင့်မေ့မိတယ်ဗျာ။မြေကြီးကအစ အားလုံးဟာ၊အသုံ့းဝင်၊အားလုံးဟာလည်းလတ်လတ် ဆတ်ဆတ်စားရသောက်ရတာတွေချည်းပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတွေ ၂၀၀၈ ကသွားကြတာ အဲဒီအတိုင်းပဲအမ၊ မပြောင်းလဲသေးဘူး။ ဟုတ်တယ်..သူတို့အစပ်အရမ်းစားနိုင်ကြတယ်။အမရေးထားတာကောင်းတယ်။